Juventus oo si weyn u qorsheyneysa inay lasoo saxiixato xiddig ka tirsan kooxda Manchester City – Gool FM
Juventus oo si weyn u qorsheyneysa inay lasoo saxiixato xiddig ka tirsan kooxda Manchester City
(Turin) 16 Luulyo 2021. Wargeyska “The Sun” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday in kooxda reer Talyaani ee Juventus ay qorsheyneyso inay lasoo saxiixato ciyaaryahanka reer Brazil iyo naadiga Manchester City ee Gabriel Jesus, inta lagu jiro suuqa kala iibsiga xagaaga.
Wargayska ayaa tilmaamay in ay kooxda Juventus xoojin doonto baacsiga ay ugu jirto saxiixa Gabriel Jesus si ay u xoojiso weerarka Bianconeri ee xilli ciyaareedka cusub.
Wararka ayaa waxay tilmaamayaan in bixitaanka Gabriel Jesus ay dhibaato weyn ku keeni karto Manchester City, maadaama ay noqon doonto koox aanan heysan weeraryahan toos ah.
Wargeyska “The Sun” ayaa wuxuu hadalkiisa intaas ku daray in Manchester City aysan la soo saxiixan karin bedelka xiddiga reer Argentina Sergio Aguero, kaasoo ka tagay xagaagan kooxda kaddib markii uu qandaraaskiisa dhacay, isaga oo ku biiray safka Barcelona.
Sidaas darteed kooxda kubadda cagta Manchester City marka hore waa inay la soo wareegto weeraryahan cusub. kaddibna waxay u oggolaan doontaa inuu baxo weeraryahankeeda reer Brazil.
Weeraryahanka kooxda Tottenham Hotspur ee Harry Kane ayaa ah bar-tilmaameedka ugu weyn ee Manchester City xagaagan, si la mid ah gooldhaliyaha ugu sareeya Bayern Munich ee Robert Lewandowski, haddii ay ku fashilanto City heshiiska Kane.
Wargeyska ayaa intaa ku daray in Juventus ay aad u xiiseyneyso qandaraaska Gabriel Jesus, ayna isku dayi doonaan inay dhameystiraan heshiiska maalmaha soo socda.
Maxkammadda Caddaaladda Yurub oo dhabar jab ku ridday kooxaha ku mideysan European Super League taasoo la xiriirta dagaalka sharcigaha ah ay kula jiraan UEFA